यी विशेषता भएका ब्यक्तिहरु हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी « हाम्रो ईकोनोमी
यी विशेषता भएका ब्यक्तिहरु हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी
हरेक मानिसको शरीरिक बनावट फरक हुन्छ । फरक–फरक बनावट र संकेतले व्यक्तिको विशेषताबारे पनि बताइरहेको हुन्छ । विशेष गरी समुद्रशास्त्रले यस्ता कुराको विशेषता बताइरहेको हुन्छ । शास्त्रका अनुसार शरीरमा भएका यी संकेतहरुले तपाईको बारेमा निम्न कुराहरु बताउँछन् ।
१.दाँतमाथि दाँत खप्टिनुः
समुद्रशास्त्रका अनुसार जुन व्यक्तिको दाँतमाथि दाँत खप्टिएको हुन्छ उनीहरु भाग्यमानी हुन्छन् । यसका साथै यस्ता व्यक्ति असल र मित्रहरुलाई सधैँ साथ दिने खालका हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो भाग्यको साथले नै अघि बढेका हुन्छन् ।
२. छवटा औँलाः
सामान्यतः हरेक मान्छेको हात र खुट्टामा पाँच–पाँच वटा औँला हुन्छन् । तर संसारमा यस्ता मान्छे पनि हुन्छन् जसको कुनै हात वा खुट्टामा ६ वटा औँला हुन्छ । ६ वटा औँला भएका मानिस अत्यन्तै भाग्यमानी हुन्छन् भन्ने कुरा समुन्द्रशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता व्यक्ति अत्यन्तै इमान्दार र हरेक कामलाई आफ्नो कामको रुपमा ग्रहण गर्छन् । यस्तै यिनीहरुले आफ्नो कामबाट प्रसिद्धि पनि कमाउँछन् ।
३.दाँतको बीच खाली ठाउँः
दाँतको बीचमा खाली ठाउँ भएका व्यक्तिहरु आर्थिक क्षेत्रका विषयमा निर्णय लिन निक्कै सक्षम हुन्छन् । समुद्रशास्त्रअनुसार यस्ता व्यक्तिहरु गफाडी पनि हुन्छन् । र कुरा बनाउन कहिल्यै पनि थाक्दैनन् । यस्ता व्यक्तिहरु भाग्यशाली हुन्छन् । भनिन्छ कि जसको अगाडिको दाँत बीचमा खाली ठाउँ हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरु पैसादेखि लिएर करिअरसम्मको कुरामा निकै नै भाग्यशाली हुन्छन् ।
४.पुरुषको छातीमा रौँः
यस्ता पुरुषहरु शान्त र सरल स्वभावका हुन्छन् । छातीमा रौँ भएका पुरुष धनाढ्य पनि हुन्छन् । जसले गर्दा यिनीहरुको जीवनमा कहिल्यै धनको कमी हुँदैन ।
यस्ता केटीहरुलाई कसरी चिन्ने ?
शारिरीक सन्तुष्टिले महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँने विश्वास गरिन्छ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ ।
आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त रु उनीहरुको नितम्ब किन फुल्दैं जान्छ ?
केटाहरुलाइ जान्ने जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो तर यस बारेमा धेरैं महिलाहरु नैं जानकार छैंनन । विवाह पश्चात धेरैं अंगहरुमा पटक पटक हात लगाउने बानी छ भने छोड्नुहोस । धेरै केटाहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ र जान्न आवश्यक छ ।
के कुराले गर्दा महिलाको शारीरिक स्वरूप मा परिवर्तन आउँछ त ?
एक अध्यनका अनुसार महिलाहरूमा आउने परिवर्तनको कारण खुलेको छ । यो सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्सका सोधकर्ताले गरेका थिए । यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइएको थियो।
यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौन सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा ठुलो थियो ।
यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने बताइएको छ ।
के तपाईंको मुख गनाउछ ? यस्ता कुरा ध्यान दिनुहोस्, गन्ध सधैंका लागि हराउँछ
मुख शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । खान, बोल्न र हाँस्नमा मुखको विशेष
महिलाको चरमसुखबारे पुरुषले जान्नैपर्ने केही विषय
अधिकांश पुरुषलाई फिमेल अर्गाजमको बारेमा थाहा नहुन सक्छ । पुरुषहरुलाई आफू सन्तुष्ट